Ngwaọrụ nlekota oru iri iri n’enye n’onwe gi ka inwere ike ibido Martech Zone
Ire ahia bu oke ihe omuma nke na mgbe ufodu o nwere ike buru oke. Ọ dị ka ịkwesịrị ịme ihe nzuzu n'otu oge: chee echiche site na usoro ịzụ ahịa gị, chepụta ọdịnaya, lekwasị anya na SEO na mgbasa ozi mgbasa ozi na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
O di nwute, enwere mgbe obula iji nyere anyi aka. Ngwongwo ahia nwere ike iburu ibu n'ubu anyị ma mee ka akụkụ ahịa ahịa na-agwụ ike ma ọ bụ na-adịchaghị mma. Ọzọkwa, mgbe ụfọdụ ha nwere ike ịnye anyị nghọta na anyị enweghị ike ịnweta ụzọ ọ bụla ọzọ - dịka nlekota oru na-eme.
Kedu ihe nlekota oru?
Nlekota oru bụ usoro mkparịta ụka nsuso metụtara ụdị gị n'ịntanetị: na mgbasa ozi mmekọrịta, forums, ndị na-achịkọta nchịkọta, weebụsaịtị, wdg. Channelsfọdụ ntanetị n'ịntanetị, dị ka ọtụtụ nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta, dịka ọmụmaatụ, na-enye ndị ọrụ ohere ịkwanye ụdị iji dọrọ uche ha. Mana ọbụlagodi aha ndị a kpọrọ aha nwere ike ịgbaghara ngwa ngwa na mkpọtụ mgbasa ozi mmekọrịta.
Site na ọnụọgụ nke ntanetị dị na ntanetị anyị, ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume mmadụ iji soro ihe niile aka. Monitoringdị nlekota oru ika na - enyere gị aka ịgbaso ọrụ ntanetị nke ụlọ ọrụ gị, lekwasị anya na aha gị, nledo na ndị asọmpi gị na ihe ndị ọzọ.
Gini mere iji choo nlekota oru?
Mana ọ dị mkpa ka ị nyochaa ihe ndị ọzọ na-ekwu gbasara akara gị n'ịntanetị? N'ezie ị na-eme!
Nlekota oru gi nyere gi aka:
Nghọta nke ọma ndị na-ege gị ntị: ị nwere ike ịchọpụta ihe ntanetị mgbasa ozi na ebe nrụọrụ weebụ ha na-eji, asụsụ ndị ha na-asụ, ebe ha bi, wdg.
Ghọta ihe ike gị na adịghị ike gị. Mgbe ị na-enyocha nyocha ị nwere ike ịchọta mkpesa na arịrịọ ndị ahịa ma chọpụta otu esi melite ngwaahịa gị.
Chebe gị ika aha megide nsogbu PR. Site na ịchọta ngwa ngwa ekwuputara na akara gị nke ọma, ị nwere ike ịnagide ha ozugbo tupu ha abanye na ọgba aghara mgbasa ozi.
Chọta ohere ịzụ ahịa: chọta nyiwe ọhụụ, ohere backlink, yana obodo iji zụọ ahịa.
Chọpụta ndị na-eme ihe na-achọ ịmekọrịta gị.
Ma nke ahụ bụ nanị mmalite. Ngwaọrụ nleba anya dị iche iche nwere ike ime ihe a niile na ndị ọzọ - naanị ị ga-ahọrọ nke ziri ezi maka azụmaahịa gị.
Ngwaọrụ nleba anya dị iche iche dịgasị iche na ike ha, ụfọdụ bụ ndị nyocha ọzọ, ndị ọzọ jikọtara nlekota na nhazi na usoro ihe omume, ụfọdụ na-elekwasị anya na otu ikpo okwu. N'ime ndepụta a, m chịkọtara plethora nke ngwaọrụ maka ebumnuche na mmefu ego ọ bụla. Enwere m olileanya na ị ga-enwe ike ịchọta nke dabara.
Ngwaọrụ nlekota oru niile na ndepụta a bụ n'efu ma ọ bụ na-enye ikpe ikpe n'efu.
Awario bụ a na-elekọta mmadụ na-ege ntị ngwá ọrụ nwere ike inyocha gị Keywords (gụnyere gị ika aha) na ozugbo. Awario bụ nhọrọ zuru oke maka obere na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ere ahịa: ọ na-enye nyocha dị ike na mkpado ọnụahịa dị ọnụ ala.
Ọ na - achọpụta aha niile nke akara gị na ntanetị mgbasa ozi, na mgbasa ozi mgbasa ozi, blọọgụ, ọgbakọ na web. Enwere usoro ihe nzacha sara mbara nke na-enye gị ohere ịme nlekota gị nke ọma na a Boolean ọnọdụ ọchụchọ -enyere gị aka ike a kapịrị ọnụ ajụjụ. Nke a nwere ike inyere aka ma ọ bụrụ na aha aha gị bụkwa aha a na-ahụkarị (chee Apple).
Na Awario ị nwere ike ịbanye na ntanetị na ntanetị na nyocha nke okwu ndị a. Ngwaọrụ a na - enye gị igwe mmadụ na akparamagwa data gbasara ndị na - ekwu maka akara gị, na - enye gị ohere iji akara gị tụnyere ndị asọmpi gị ma nye gị akụkọ dị iche na ndị na - emetụta ndị na - akpọ aha gị.
Nwere ike ịtọlite ​​Awario iji zitere gị ọkwa ọhụụ site na email, Slack, ma ọ bụ ọkwa ọhụụ.
Ahịa: $ 29-299 mgbe a ga-akwụ ụgwọ kwa ọnwa; kwa afọ atụmatụ ịzọpụta gị 2 ọnwa.
Ọnwụnwa efu: ụbọchị 7 maka atụmatụ Starter.
Onye nlekota ndi mmadu
Onye nlekota ndi mmadu bụ oké nhọrọ maka ndị nwere mmasị karịsịa na-arụ ọrụ na onye ọ bụla kwuru. Ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ dị mfe iji rụọ ọrụ nke na - enye gị aha gbasara akara gị site n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche gụnyere Facebook, Twitter, Reddit, YouTube na ndị ọzọ.
Uru mbu nke Social Searcher bu ihe omuma ya - mgbe igara na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, a gwara gị ozugbo itinye ya na isiokwu gị wee bido nyochaa. Adịghịdị mkpa ịdebanye aha na email. Onye Nchọgharị Nnyocha na-ewe ntakịrị oge iji chọta ebe a kpọtụrụ aha wee gosi gị ndepụta jupụtara na ntinye sitere na isi mmalite dị iche iche. I nwekwara ike pịa taabụ taabụ iji hụ mmebi aha ndị sitere na isi mmalite, site na mgbe ezigara ha, na mmetụta.
Social Searcher bụ nnukwu nhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele ngwa ngwa kwuru banyere isiokwu dị n'ịntanetị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe usoro nlekota oru mebere, ikekwe leba anya na ngwaọrụ ndị ọzọ nwere UI dị mfe.
Ricnye ọnụahịa: n'efu, mana ị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka atụmatụ (site na € 3., 49 ruo € 19.49 kwa ọnwa) iji melite ozi ịntanetị na nlekota na-agbanwe agbanwe.
Ikpe ikpe n'efu: ngwá ọrụ ahụ bụ n'efu.
Isi okwu bụ ihe eji elekọta mmadụ mgbasa ozi nke na-enye nlekota oru nyocha yana yana ibipụta ya. O jikwa ya ike ịme ihe abụọ a.
Ọ na-enye ohere ịwụnye n'ime mkparịta ụka ọ na-ahụ n'oge ma na-eso ndị ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta. Ọ nwere ike ịgbaso akara gị ma na mgbasa ozi na weebụ yana n'ihe karịrị asụsụ 20.
Ihe na-eme ka Mentionlytics pụta ìhè bụ Social Intelligent Advisor. Ọ bụ ọrụ AI nke na-enweta nghọta dị omimi site na data mmekọrịta. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-enyocha akara gị, ọ na-enwe ike ịchọta isi ihe mgbu nke ndị ahịa gị ma gosi gị ya.
Na mgbakwunye na nke ahụ, Mentionlytics na-enye nyocha na iru na mmetụta nke ndị akpọrọ aha, nyochaa onye asọmpi, na ọnọdụ ọchụchọ Boolean.
Ahịa: site na $ 39 ruo $ 299 kwa ọnwa.
Ikpe ikpe n'efu: ngwá ọrụ ahụ na-enye nnwale n'efu n'efu ụbọchị 14.
Tweetdeck bụ ngwa ọrụ gọọmentị sitere na Twitter iji nyere gị aka ijikwa ya nke ọma. A haziri dashboard na mmiri ka ị nwee ike ịgbaso ndepụta, ọkwa, na mkpọtụ nke ọtụtụ akụkọ ozugbo.
Banyere nlekota oru ika, ị nwere ike ịtọba iyi "Seach" nke ga-ekwupụta okwu niile nke isiokwu gị (aha njirimara ma ọ bụ ibe weebụ gị) na dashboard gị. Ọ na-eji otu mgbagha dị ka Advanced Search na Twitter ka ị nwee ike ịhọrọ ọnọdụ, ndị edemede, na ọnụ ọgụgụ nke itinye aka maka ntọala nlekota oru ika gị.
Isi uru nke Tweetdeck bụ ntụkwasị obi ya: ebe ọ bụ ngwaahịa Twitter, ị nwere ike ijide n'aka na ọ na - ahụ ihe niile ekwuru na ọ ga - ekwe omume na ọ gaghị enwe nsogbu ijikọ na Twitter.
Ihe na-adịghị mma bụ na ọ na-elekwasị anya na otu ikpo okwu naanị. Ọ bụrụ na akara gị nwere ọnụnọ Twitter ma chọọ ngwọta n'efu iji nyochaa ya, Tweetdeck bụ nhọrọ zuru oke.
Nye ọnụahịa: n'efu.
O nwere ike iju gị anya ịhụ SEMrush na ndepụta a - ka emechara, a maara ya dị ka ngwa SEO. Agbanyeghị, ọ nwere ikike nyocha ngwa ngwa siri ike, nke mbụ, na-elekwasị anya na weebụsaịtị, n'ezie.
Ngwaọrụ ahụ na-enye nkọwa kensinammuo ebe ekwuru ebe ị ga - arụ ọrụ na ederede na ibe, pịa ma kpọọ ha, ma nyochaa nsonaazụ maka foto zuru oke. Tinyere weebụsaịtị, SEMrush na-enyocha Twitter na Instagram.
Ebe ọ bụ na SEMrush dị na ebe nrụọrụ weebụ, ọ na-enye ndị ọrụ ikike inyocha ngalaba ụfọdụ. Nke a nwere ike ịba uru bara uru maka nlekota ụlọ ọrụ metụtara ụlọ ọrụ ma ọ bụ weebụsaịtị webụsaịtị akọwapụtara ebe a na-atụle akara gị kacha.
Ọzọkwa, SEMrush bụ ngwá ọrụ na-adịghị ahụkebe nke nwere ike ịlele okporo ụzọ site na ntanetị kwuru na njikọ nwere njikọ - ntinye ya na Google Analytics na-enye gị ohere ịgbaso clicks niile na weebụsaịtị gị.
Ricnye ọnụahịa: ika nlekota so na Guru Plan na-efu $ 199 kwa ọnwa.
Ọnwụnwa efu: enwere ikpe ikpe n'efu nke 7 dị.
Kwuo bụ ụlọ ọrụ French nke raara nye nlekota na ịge ntị na mkparịta ụka n'ịntanetị. O zuru oke maka ụlọ ọrụ ndị dị n'etiti na ụlọ ọrụ ọkwa nke ụlọ ọrụ ebe ọ na-enye ọtụtụ nchịkọta dị iche iche na njikọta yana ngwaọrụ ndị ọzọ maka nlekota oru ike.
Ọ na-etinye ọtụtụ ihe dị mkpa na ezigbo oge ọchụchọ - n'adịghị ka ụfọdụ ngwaọrụ ndị ọzọ na ndepụta a (Awario, Brandwatch) ọ na-enye naanị data akụkọ ihe mere eme (yabụ ekwuru na okenye karịa otu izu) dị ka mgbakwunye. Ọ na-adọta data sitere na Facebook, Instagram, Twitter, forums, blọọgụ, vidiyo, akụkọ, weebụ, na ọbụna redio & TV iji hụ na ị nọ na mkparịta ụka niile na-eme gburugburu akara gị.
Monitoringdị nlekota oru ika ahụ na-enye dashboard nchịkọta zuru ezu na ụdị metrik niile gụnyere okike, mmetụta mmetụta, iru na wdg. O nwekwara ngwakọta API nke na-enyere gị aka iwulite nchịkọta ha n'ime ngwa ọrụ gị ma ọ bụ weebụsaịtị.
Nye ọnụahịa: na ngwá ọrụ bụ free ruo 1,000 kwuru. Site ebe ahụ, ọnụahịa na-amalite na $ 25 kwa ọnwa.
Ọnwụnwa efu: Mention na-enye ikpe ụbọchị 14 n'efu maka atụmatụ akwụ ụgwọ.
Buzzsumo bu ngw’oru ahia nke n’eri ahia ka ika ya nlekota oru gha wee buru mmasi puru iche nye ndi ahu bu ndi na-ebute ọdịnaya.
Ngwaọrụ a na - ahapụ gị ka ị soro ọdịnaya niile na - akpọ aha gị ma na - enyocha itinye aka na gburugburu ọdịnaya ọ bụla. Ọ na-enye gị ọnụ ọgụgụ nke mbak na mgbasa ozi mmekọrịta, ọnụ ọgụgụ nke mmasị, echiche na pịa. Ọ na-egosikwa na stats niile maka ọchụchọ gị.
Site na ịtọ ntọala, ị nwere ike ị na-aga na nke ọ bụla na isiokwu ọhụrụ ọ bụla na blog post na-akpọ aha gị. Nwere ike ịmepụta alerts soro akara kwuru, osompi kwuru, ọdịnaya site na ebe nrụọrụ weebụ, isiokwu kwuru, backlinks, ma ọ bụ onye edemede.
Nye ọnụahịa: ọnụahịa na-amalite na $ 99.
Ọnwụnwa efu: enwere ikpe ụbọchị 30 n'efu.
Kwlọ Talkwalker nwere aha na nchịkọta akụkọ nke mgbasa ozi mmekọrịta - a na-ewere ya dị ka otu n'ime isi na-ege ntị na nyocha ngwaọrụ. Ma n'ụzọ ziri ezi!
Ọ bụ ngwa ọrụ Enterprise maka nnukwu ndị otu azụmaahịa nwere ọtụtụ dashboard nyocha yana ihe ọmụma AI. Talkwalker na-anapụta data na oge mana ọ na-anakọta ma na-enyocha akara aha na-aga azụ ruo afọ abụọ. Otu ihe dị iche na Talkwalker na ndị na-asọmpi ya bụ nhụcha anya: ngwa ọrụ nwere ike ịchọta akara ngosi gị na onyonyo yana vidiyo na Internetntanetị.
Talkwalker na-enweta data sitere na netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta 10 gụnyere ndị ọzọ dị ka Webo na TV na akụkọ redio.
Ahịa: $ 9,600 + / afọ.
Ọnwụnwa efu: enweghị ikpe ikpe n'efu, mana enwere ngosipụta n'efu.
Ọzọ Enterprise-larịị ika nlekota ngwọta bụ Agbaze mmiri. Ọ bụ usoro mgbasa ozi na mgbasa ozi nyocha na-adabere na AI iji nye nghọta nghọta.
Ọ na-ele anya karia naanị mgbasa ozi mmekọrịta, na-enyocha ọtụtụ nde post kwa ụbọchị site na ntanetị mgbasa ozi, blọọgụ, na saịtị akụkọ. Ọ na-ehichapụ okwu ndị na-adịghị mkpa ma na-enye echiche maka nchebara echiche masịrị gị
Meltwater agụnye ọtụtụ dashboards na nyochaa, benchmark, na nyochaa gị online ọrụ. I nwekwara ike chepụta ahaziri dashboards iji gboo mkpa gị ka mma.
Ahịa: $ 4,000 + / afọ.
Ọnwụnwa efu: enweghị nnwale n'efu, mana ị nwere ike ịrịọ maka demo n'efu.
NetBase Ngwọta bụ nnukwu usoro ọgụgụ isi azụmaahịa nke gụnyekwara ọgụgụ isi asọmpi, njikwa nsogbu, nyocha teknụzụ na azịza ndị ọzọ.
Ọ bụ ika nlekota ngwá ọrụ mara mma nke ukwuu - ọ na-enye gị ohere iji soro gị ika gafee mmadụ mgbasa ozi, weebụsaịtị, na omenala media ọwa; chọpụta isi ihe ndị na-emetụta ụdị mmasị site na nyocha mmetụta ma kee data a niile na KPI azụmahịa gị.
Na mgbakwunye na data sitere na mgbasa ozi mgbasa ozi, ọ na-eji isi mmalite ndị ọzọ dịka nyocha, otu ndị na-elekwasị anya, ọkwa, na nyocha, iji chọpụta ihe niile gbasara akara gị.
Nye ọnụahịa: NetBase anaghị enye ọhaneze ozi banyere ọnụego ya, nke a na-ahụkarị maka ngwa ọrụ nke ụlọ ọrụ. Nwere ike nweta ọnụahịa ọnụahịa site na ịkpọtụrụ ndị otu ahịa.
Ikpe ikpe n'efu: ị nwere ike ịrịọ maka ngosi efu.
Gịnị Bụ Ihe Mgbaru Ọsọ Gị?
Nlekọta nleba anya bụ ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ ọ bụla, mana ngwaọrụ ndị ị ga-eji kpamkpam dabere na gị. Lelee mmefu ego gị, nyiwe ịchọrọ ikpuchi, yana ebumnuche gị.
Youchọrọ ilekwasị anya na ntinye ndị mmadụ n'otu n'otu iji lekọta arịrịọ ndị ahịa na ịbawanye njikọ? Ma obu ikekwe ichoro ichoputa ndi guru gi ka i meziwanye usoro ahia gi? Ma ọ bụ ị nwere mmasị na nzaghachi sitere na weebụsaịtị ụfọdụ ma ọ bụ nyochaa ndị nchịkọta?
Enwere ngwaọrụ maka mkpa na mmefu ego ọ bụla, ọtụtụ n’ime ha na-enyekwa nsụgharị n'efu ma ọ bụ nnwale efu ka m wee gbaa gị ume ka ị chọta nke dabara na mkpa gị ma nwalee ya!
Disclaimer: Martech Zone na-eji njikọ njikọ ha maka SEMrush n'elu.
Tags: egwunlekota oruika aha ngwaọrụbuzzsumogbazee mmiribanyereedeturungwaọrụ nlekotanetbasesemrushna-elekọta mmadụ na-ege ntịonye nyocha mmadutalkwalkerTweetdeck
Top 10 App Store Optimization Tools to Improve Your App Ranking Na Popular App nyiwe
Etu kachasị iji bulie aha gị (na ihe atụ)